Jason Joel Desrouleaux (Miami, Florida, 21 sebteembar 1989) ama Jason Derulo, waa fanaan Mareykan ah. Jason Joel Desrouleaux  (wuxuu dhashey Sebtember 21, 1989), oo xirfad ahaan loo yaqaan Jason Derulo (/ dəruːloʊ /; horey loogu qaabeeyey Derulo),  waa fanaan Maraykan ah, heesaha heesaha, iyo qoob-ka-ciyaarka. Tan iyo markii uu bilowday xirfadiisii ​​hore ee xisbigu, 2009, Derulo ayaa iibisay in ka badan 30 milyan oo kelinimo ah  waxayna ku guulaysteen kow iyo toban xitaa Platinum, oo ay ku jiraan "Wiggle", "Dir Dirty", "In My Head", iyo "Whatcha Say".   
Ka dib markii ay soo saartey diiwaanno dhowr ah oo farshaxanayaal ah isla markaana heesaha heesaha qoraashka ah ee Iskaashatada Lacagta Lacagta Lacagta Birdman, Milkiilaha Lacagta Yaryar ee Lil Wayne iyo raxanka Diddy, Derulo waxay saxiixeen qoraalada yar yar ee Beluga Heights. Ka dib markii Beluga Heights uu ka mid noqday kooxda Warner Music Group, Derulo wuxuu soo saaray mid ka mid ah "Whatcha Say" bishii May 2009. Waxa ay iibisay shan milyan oo dijitaal ah oo dijital ah, helitaanka shahaadada RIAA ee Saddexleey Platinum, oo gaarey lambarka 1 ee Maraykanka iyo New Zealand . Derulo ayaa sii deysay labaadkiisii ​​labaad, "In My Head", December 2009 iyo albumkiisa ugu horeeyay ee jason, Jason Derulo, wuxuu raacay 2-dii Maarso 2010-kii. Waxa uu sii daayay albaabadiisa labaad, taariikhda mustaqbalka, 16-kii Sebtembar 2011; albaabka waxaa ka horeeyay sii deynta lambarka UK - hal hal "Ma rabto inaad guriga tagto". Filimka saddexaad ee Derulo, oo lagu magacaabo Tattoos, ayaa la sii daayay 24-kii September, 2013 kadibna lagu soo rogay asalkiisii ​​saddexaad ee Us, Dir Dirta, oo la sii daayay April 15, 2014.
Sanadkii 2015, Derulo wuxuu sii daayay halkiisa "Want To Want Me" oo uu ku dhawaaqay aflaxa 4aad ee Studio studio, Everything Is 4, kaas oo la sii daayey June 2, 2015. Sawiradiisa xigta, 2Sidid, wuxuu raaci doonaa 2018.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jason_Derulo&oldid=179455"
Last edited on 3 Sebteembar 2018, at 10:59
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Sebteembar 2018, marka ee eheed 10:59.